Tag: linkin | Martech Zone
Muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay sawirkaaga astaanta guud ee LinkedIn?
Talaado, Janaayo 11, 2022 Talaado, Janaayo 11, 2022 Douglas Karr
Dhawr sano ka hor, waxaan ka qayb galay shir caalami ah waxayna lahaayeen xarun otomaatig ah oo aad sawiri karto oo aad ka heli karto dhowr xabbadood. Natiijadu waxay ahaayeen kuwo cajiib ah… sirdoonka kaamirada ayaa madaxaaga dhigay bartilmaameed, ka dib nalka ayaa si toos ah u hagaajiyay, oo kor u kacay… sawirada waa la qaaday. Waxaan dareemayay sida dang supermodel si fiican ayay u soo baxeen… isla markiiba waxaan ku dhejiyay profile kasta. Laakiin runtii aniga ma ahayn.
Salesflare: CRM ee Ganacsiga Yaryar iyo Kooxaha Iibka ee iibiya B2B
Talaado, Nofeembar 16, 2021 Talaado, Nofeembar 16, 2021 Douglas Karr
Haddii aad la hadashay hoggaamiye iibiye kasta, hirgelinta nidaamka maaraynta xidhiidhka macaamiisha (CRM) waa waajib… iyo sidoo kale madax xanuun. Faa'iidooyinka CRM ayaa aad uga miisaan culus maalgashiga iyo caqabadaha, in kastoo, marka alaabtu ay fududahay in la isticmaalo (ama loo habeeyo habkaaga) iyo kooxdaada iibka waxay arkaan qiimaha oo ay qaataan oo ka faa'iidaystaan ​​tiknoolajiyada. Sida qalabka iibka intooda badan, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya sifooyinka looga baahan yahay a
Circleboom Daabacaa: Nakhshad, Qorshe, Jadwal, Oo Otamaatig u samee Suuqgeyntaaga Warbaahinta Bulshada
Arbacada, Nofeembar 10, 2021 Arbacada, Nofeembar 10, 2021 Douglas Karr
Haddii aad tahay sumad, awoodda aad udub dhexaad u tahay suuq-geyntaaga warbaahinta bulshada hal, madal maaraynta warbaahinta bulshada oo dareen leh ayaa muhiim u ah badbaadinta wakhtiga iyo geynta xeeladahaaga. Tilmaamaha iyo faa'iidooyinka waxaa ka mid ah: Maareynta xisaabaadka badan - Circleboom maamulaha xisaabaadka badan ayaa fududeynaya in la maareeyo Twitter, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Instagram, iyo xisaabaadka Pinterest ee hal madal Kobci qoraalladaada - Ka-qaybgalka boostada warbaahinta bulshada ayaa si toos ah xiriir ula leh oo leh naqshadda nuxurka leh, iyo
Talaado, September 7, 2021 Talaado, September 7, 2021 Douglas Karr
Shirkadaydu waxay ka caawinaysay macaamiil yar hirgelinta iyo ballaarinta dadaalkooda suuqgeynta Shopify dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Sababtoo ah Shopify waxay ku leedahay suuq-geyn aad u weyn warshadaha elektaroonigga ah, waxaad ogaan doontaa inay jiraan tan badan oo isku-dhafan oo wax-soo-saar leh oo nolosha u fududeeya suuqgeeyayaasha. Iibinta ganacsiga bulshada Mareykanka ayaa kor u kici doonta in ka badan 35% si ay u dhaafto $ 36 bilyan sannadka 2021. Sirdoonka Insider Koritaanka ganacsiga bulshada waa isku -darka isku -dhafan